နေလောင်ခြင်းနှင့်၎င်း၏အကျိုးဆက်များဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး - ကိုဘယ်လိုငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ကာကွယ်ပေးဘူး
သငျသညျကျောက်ပုစွန် get ပြုလျှင်
နွေရာသီအားလပ်ရက်အချိန်နှင့်ပွင့်လင်းအတွက်အမှုအရာအမျိုးမျိုးတို့ကိုလုပ်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ Big နှင့်အသေးစားမရှိလမ်းအတွက်လုံလောက်အောင်နေရောင်ကာကွယ်ဆေးနှင့်အတူပွတ်သပ်ဖို့မေ့လျော့သင့်ပါတယ်။ သို့သော်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှအရေးကြီးသောနေလောင်ခြင်းဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, အဘယ်ကြောင့်အလွန်အကျွံနေရောင်ထိတွေ့မှုနှင့်မည်သို့အကောင်းဆုံးကဒီမှာဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ကနေသူ့ရဲ့အသားအရေကိုကာကွယ်ပေးရန်လိုအပ်သနည်း
နေရောင်ခြည်မှာပါတဲ့ခရမ်းလွန်ဓါတ်ရောင်ခြည်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၌သင်တို့ကိုရှည်လျားလွန်းထိုသို့ထိတွေ့နေကြအခါတိုင်းအရေပြားပါရှိသည်။ အခြားအမှုအရာတို့ကိုများထဲတွင်အဆိုပါနာကျင်နေလောင်ခြင်း, အရေပြားဖိအားအလွန်အထိခိုက်မခံသည်အဘယ်ဆီသို့ဦးတည်နိုင်ပါတယ်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, တဦးတည်းကိုမကြာခဏပင်မိုးအုံ့ရက်သို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအရိပ်ထဲမှာနေလောင်ရဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှကြောင်းကိုမေ့လျော့။ ပူနွေးသောနိုင်ငံများတွင်ခရီးသွားသည့်အခါအမြဲတမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအစီအမံထို့ကြောင့်မရှိမဖြစ်ဖြစ်ကြသည်။ အဝတ်အစားဖုံးအုပ်၏အပြည့်အဝဝတ်ထား, နေရောင်ကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဒီပူတဲ့ရာသီဥတုမှာအမြဲသာယာမဟုတ်ပါဘူးကြောင့်, ကြောင့်အလင်းနှင့် breathable ဖြစ်သင့်သည်။ သငျသညျနည်းနည်းရွှေ့တဲ့အခါမှာဒါတချွေးကိုချိုးဖောက်မရပေါ့။ ဤသည်မှာလည်းနေရောင်ဦးထုပ်ဗီရိုများမှာသို့မဟုတ်တစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခု parasol အဖြစ်။
တစ်ခုသာ swimsuit တစ်ရေချိုးဝတ်စုံကိုသို့မဟုတ်ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ကြံစည်, တဦးတည်းမြင့်မားသောနေရောင်ကာကွယ်မှုအချက်ရှိပါတယ်တဲ့နေရောင်ကာကွယ်ဆေးအပေါ်အားကိုးသင့်တယ်။ တဦးတည်းလည်းမျက်စိအလွန်အကျွံဓါတ်ရောင်ခြည်ဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေကြသည်ဘယ်တော့မှနေကာမျက်မှန်အပြည့်အဝသို့မဟုတ်အနည်းငယ်သာအဝတ်အစားဖြစ်စေ, မေ့လျော့, သင့်ကြောင်းသို့မှသာ။ ထို့နောက်ဤရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေမှနာ: အခုကတတ်နိုင်သမျှသွားလာရင်းထံမှအားလပ်ရက်အပေါ်!
အရေပြားတစ်ဦးပြုတ်ကျောက်ပုစွန်အဖြစ်အနီရောင်သည်ဆိုပါက, သင်နေထဲမှာရှည်လျားလွန်းပါပြီဟုငါသိ၏။ ဒါကြောင့်တဦးတည်းပေမယ့်အကြိမ်ဖမ်းမိခြင်းနှင့်အရေပြားနှင့်ယားယံလောင်ကျွမ်းမူလျှင်ဘာလုပ်? အအေးလိမ်းဆေးနှင့်လိမ်း moisturize နှင့်ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်အသားအရေကိုကူညီပေးပါတယ်။
မကြာခဏထုတ်ကုန်ရှားစောင်းလက်ပတ်သို့မဟုတ် chamomile ဆံ့ကြောင်းအကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကြောင်းအကောင်းဆုံးအကူအညီကိုလည်းကအကွာအဝေးအတွင်းအများအပြားလိမ်းဆေးရှိသည်ဖို့အကျိုးရှိစေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သောအရေပြားအမျိုးအစားပေါ် မူတည်. နေစဉ်။ အဘယ်အရာကိုနာကျင်မှုကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများအတွက်ကိုလည်းကောင်းစွာသင့်တော်ပါတယ်အေးမြ compression သို့မဟုတ်ရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းဖြစ်ကြသည်။ သင်တို့သည်လည်းအလေးပေးအသားအရေသက်သာရာရစေဖို့အရည်များများသောက်ရသင့်ပါတယ်။
အလယ်အလတ်နှင့်ပြင်းထန်နေလောင်မှာ, တဦးတည်းဆရာဝန်ရောင်ရမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများကနေလွန်ခံရဖို့အကြံပြုလိုတယ်။ မူလစာမျက်နှာကုစားယေဘုယျအားအကြံပြုကန့်သတ်ထားပါသည်။ အဖြစ်မကြာခဏဒေသများအပေါ်တစ်ဦးနေလောင်ခြင်းထောပတ်ပွတ်သပ်ရန်အကြံပြုထားသည်။
ကျနော်တို့ငြူစူခြင်းနှင့်အတူအစိမ်းရောင်ရှိကြသည်အဘယ်ကြောင့် - ကလေးများမေးခွန်းတစ်ခုကို
သွားဆရာဝန်၏ကွောကျရှံ့ခွငျး | ကျန်းမာခြင်း